Ukukhiqiza Umthamo Ophansi
Ukuhlolwa Kokuqinisekisa Ubunjiniyela
Emashini e-CNC, kusetshenziswa i-G53 emuva kwemvelaphi esikhundleni se-G28
nge-Createproto Rapid Manufacturing ngomhla ka-Dec 09, 2021
Ukubuyela kumsuka (okubuye kubizwe ngokuthi i-zeroing) kuwumsebenzi okufanele uqedwe njalo lapho isikhungo somshini sivulwa. Lesi senzo esibonakala silula sibaluleke kakhulu ekunembeni komshini. Ngaso sonke isikhathi uma sisebenzisa i-caliper, sizosetha kabusha ikhalipha ibe uziro, noma sisebenzise i-g...
Ukugqwayiza komshini kukutshela izinto eziyi-12 zokwelashwa kwendawo
nge-Createproto Rapid Manufacturing ngo-Sep 14, 2021
I-Laser engraving I-Laser engraving, ebizwa nangokuthi i-laser engraving noma ukumaka nge-laser, kuyinqubo yokwelashwa kwendawo kusetshenziswa izimiso zokubona. I-laser beam isetshenziselwa ukuqopha uphawu oluhlala njalo ebusweni bento noma ngaphakathi kwempahla esobala. I-laser beam ingakwazi ukukhiqiza ...
I-Createprot inikeza ishidi lensimbi yemikhiqizo yezokwelapha
ngu-Createproto Rapid Manufacturing ngo-Aug 23, 2021
Umshini wokusika i-laser i-FO-MⅡ RI3015 yakho kokubili ukufakwa okuyisicaba namapayipi Gxila ekucutshungulweni kwensimbi okunembayo kanye nokwenza imishini enembile Createproto egxile ekucubunguleni insimbi yeshidi nokunemba, sizibophezele ekukhiqizeni izingxenye zemishini ezihlobene...
I-AMR ifakwe ingalo yerobhothi ukuze ibone ukukhiqizwa kwethuluzi lomshini we-CNC
ngu-Createproto Rapid Manufacturing ngo-Aug 13, 2021
Enkathini yangemva kobhubhane, igagasi lokuguqulwa kwemishini ezenzakalelayo yamabhizinisi amancane naphakathi nendawo liza ngokushesha. Izinkampani eziholayo zamarobhothi eselula azimele kanye namarobhothi asebenzisanayo zibamba imakethe ngenkuthalo futhi zithola unyawo ekuguquleni okusezingeni eliphezulu...
I-prototyping esheshayo ukuthi ungashintsha kanjani ukuthuthukiswa komkhiqizo
nge-Createproto Rapid Manufacturing ngo-Aug 10, 2021
Iyini i-prototyping esheshayo? I-Rapid prototyping ibhekisela ezinqubweni ezihlukahlukene zokukhiqiza ezisizwa ngekhompiyutha ezingakopisha izingxenye kumamodeli edijithali. Uma kuqhathaniswa nezindlela zokukhiqiza ezivamile, lezi zinqubo zinembe kakhulu futhi zithatha isikhathi esincane. Onjiniyela abaningi bazihlanganisa ngokuzenzakalelayo...
I-automation esetshenziswa ku-CNC Machining ithuthukisa ukusebenza kahle komkhiqizo
nge-Createproto Rapid Manufacturing ngomhla ka-Jul 22, 2021
I-automation yokukhiqiza imboni iyona ehamba phambili yokuthuthukiswa kwezimboni zamanje. Ingenye yezindlela ezibaluleke kakhulu zokuthuthukisa ukukhiqizwa kwezimboni. Amazwe ezimboni athuthukile ayithatha njengesizinda sokuthuthukiswa kwezimboni. Imishini yemishini ye-CNC, efana ne-CNC, isasebenza...
Ubuchwepheshe bokuphrinta be-3D busiza ukuthuthukiswa kwamathoyizi
ngu-Createproto Rapid Manufacturing ngomhla ka-Jul 16, 2021
Eminyakeni yamuva, uhlobo lobuchwepheshe lushintshe buthule imboni yokuklama amathoyizi, okungukuthi, ubuchwepheshe bokuphrinta be-3D. Lobu buchwepheshe bungalolonga ngokushesha ukwakheka kwamathoyizi, buguqule ngokushesha ubuciko babaklami bamathoyizi nabakhiqizi bamathoyizi bube ngokoqobo, futhi bucebise kakhulu umklamo wamathoyizi. Ukuhlukahluka kanye...
Imodeli ye-3D ephrintiwe ye-neurosurgery ukusiza izinhlelo zokuhlinza
ngo-Jul 14, 2021
Ubuchwepheshe bokuphrinta be-3D wuhlobo olusha lobuchwepheshe be-prototyping obusheshayo obakha ungqimba lwezinto ngongqimba kusetshenziswa izinto zebhayoloji ezikhishwe ezinsimbi, izitsha zobumba, ama-polymers nezinto eziyinhlanganisela ezingaphrintwa ngezinhlangothi ezintathu, ngokusekelwe kumamodeli edijithali. Ku-neurosurgery, ngemva kokuthola...
Ubuchwepheshe bokuskena be-3D busetshenziswa embonini yezimoto
nge-Createproto Rapid Manufacturing ngomhla ka-Jul 07, 2021
Isizinda sohlelo lokusebenza Ngokuthuthuka okusheshayo kwemboni yezimoto, abakhiqizi bemikhiqizo ehlukahlukene baqhudelana ngokwenza kahle, ukucubungula kwe-CNC, ukuphrinta kwe-3D, i-vacuum laminating, njll. benze uchungechunge olukhulu lwezimboni. Isibalo sezimoto ezifuywayo ezweni lami siyaqhubeka nokukhuphuka, futhi...
Yini okudingeka ukwazi ngemboni yokuphrinta ye-3D?
nge-Createproto Rapid Manufacturing ngomhla ka-Jul 02, 2021
Ubuchwepheshe bokuphrinta be-3D bubizwa nangokuthi ubuchwepheshe bokukhiqiza okungeziwe, obusekelwe kumafayela emodeli yedijithali, kusetshenziswa insimbi eyimpuphu noma ipulasitiki nezinye izinto eziboshiwe ukuze kwakhiwe izinto ngokuphrinta ungqimba ngongqimba. Ukuphrinta kwe-3D kuvame ukuzuzwa ngokusebenzisa ubuchwepheshe bedijithali m...
Uyini umqondo wezingxenye zokunemba zemishini ye-CNC?
nge-Createproto Rapid Manufacturing ngomhla ka-Jun 24, 2021
Ukunemba komshini kwesikhungo somshini we-CNC yikona okukhathaza kakhulu amakhasimende. Ukunemba komshini kwesikhungo somshini we-CNC kubhekisela ezingeni lokunemba lomkhiqizo okhiqiziwe. Embonini yemishini, ukunemba komshini kanye nephutha lokwenza imishini yomibili imigomo ye-evaluatin...
Ukuphrinta kwe-3D ezimotweni ukonga isikhathi nezindleko
kuze kube nguJuni 22, 2021
Iqhutshwa abezindaba, ukuphrinta kwe-3D kwabonakala emphakathini njengemboni yobuchwepheshe obuphezulu, futhi ithonya layo lemidiya lafinyelela umvuthwandaba walo ngemva kuka-2023. Eqinisweni, ukuphrinta kwe-3D kusewubuchwepheshe bokukhiqiza. Eminyakeni yakamuva, imboni yezokukhiqiza yezwe lami ithuthuke ngokushesha, kodwa...
I-Cnc Rapid Prototyping, I-Cnc Prototyping, I-3d Printing & Rapid Prototyping Services, I-Prototyping esheshayo, I-Prototyping esheshayo, I-Prototyping Esheshayo Nokukhiqiza,
CREATEPROTO ISINGENISO. PDF
© Copyright - 2011-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe.